MESSI TEAM: Kahor Final-ka Copa Del Rey, Barcelona Oo Loo Sheegay Inay Noqotay Koox Hal Ciyaartoy Ah Oo Gabi Ahaanba Ku Tiirsan Lionel Messi. - Gool24.Net
Ciyaartoygii hore ee kooxda Barcelona ee Juan Antonio Pizzi haatana ah shaqsi ku shaqaysta xirfada tababarenimo ayaa sheegay in kooxdiisii hore ay ahayd mid kulamadii ugu dambeeyay si aad ah ugu tiirsan Lionel Messi.
Pizzi ayaa la weydiiyay inuu ka hadlo aragtidiisa Final-ka Copa Del Rey oo u dhaxayn doona Barcelona oo uu heerkiisii ugu sarreeyay ee ciyaartoynimo kusoo gaadhay iyo Valencia oo ah koox uu tababaray.
Juan Antonio Pizzi ayaa sheegay in Barcelona ay saamayn doonto dhibaatadii kusoo qabsatay ka hadhistii Champions League balse ay ahayd mid xilli ciyaareedka aad u wanaagsan isaga oo dhinaca kale amaanay kooxda Valencia oo wacdarro dhigaysa.
Pizzi ayaa ugu horreynba yidhi “Waa mid aan su’aali ka taagnayn in dhirbaaxadii Champions League ay saamayn doonto iyaga, Laakiin Barcelona waxa ay usoo ciyaartay si aad u wanaagsan xilli ciyaareedka gudihiisa.
“Waxa ay noqon doontaa kulan aad u adag oo u dhaxeeya laba kooxood oo u ciyaara inay si aad u wanaagsan u ciyaaraan”
“Kala duwanaanshaha ayaa ah in Barca ay haysato kaas oo gabi ahaanba ah mid aan la xakamayn karin marka uu ku jiro qaabkiisa ugu fiican”
Juan Antonio Pizzi ayaa sheegay in Barcelona aysan kaliya ku tiirsanayn goolasha badan ee Lionel Messi balse gabi ahaanba uu Leo masuul ka yahay weerarka kooxdeeda.
“Kulamadan ugu dambeeyay Barca waxa ay u muuqatay mid gabi ahaanba ku tiirsan isaga, Kaliya maaha inuu dhaliyay goolasha ugu badan ee kooxda, Laakiin guud ahaan qorshaha weerarka ee kulanka ayaa hareerihiisa laga dhisaa”